How To Pay |Myanmar Music Store
Payment methods Instruction
You need login with your existing ursername(email) and password. If you don't have the account you need to register.
လူကြီးမင်းသည် Myanmar Music Store တွင် Register လုပ်ထားပြီးသူ ဖြစ်ပါက မိမိ၏ သက်ဆိုင်ရာ Account ဖြင့် ငွေပေးချေရန် ဝင်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။( Account မရှိပါက Register ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။) (Register လုပ်ရန်)
Figure (1) - Login Page (Click here to go)
လူကြီးမင်းတို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တေးသီချင်း (သို့မဟုတ်) Album များအား ရွေးချယ် ဝယ်ယူရန် Album Detail Page အား ရှေးဦးစွာ ဝင်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက် ရာ တေးသီချင်း (သို့မဟုတ်) Album ၏ သက်ဆိုင်ရာ Buy Button အား Click နှိပ်၍ ငွေပေးချေခြင်း လုပ်ငန်းအား စတင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Figure (2) - Album Detail Page
After click buy button then you can see the shopping cart, you can choose the payment options with Pay from your account (or) Pay with mobile bill (or) MyanPay (or) Ypay (or) checkout with master visa (or) Cb pay (or) Pay with Mobile Phone Bill. These payment options are only for who is the register with Myanmar .Paypal,master visa can be use for who is the register with foregin country
ငွေပေးချေခြင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် Click Button အား နှိပ်ပြီးသည့် အခါတွင် အောက်ဖော်ပြပါ Payment Options များအား လူကြီးမင်း၏ Shopping Cart တွင် တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဖော်ပြပါ သင်၏အကောင့်မှငွေဖြင့်ဝယ်မည်,သင်၏ဖုန်းဘေလ်မှငွေဖြင့်ဝယ်မည်, MyanPay ,Ypay,Master Visa နှင့် CB pay အစရှိသော ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ User များသာ အသုံးပြုပေးချေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှ user များအတွက် PayPal,Master Visa စသည့် Payment ၂ မျိုးဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်
Figure (3) - Payment Options
If you choose Pay from your account payment option, You can checkout with Pay from your account payment option.
သင်၏အကောင့်မှငွေဖြင့်ဝယ်မည် ကို သုံးပြုမည် ဖြစ်ပါက အောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံအား မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး Paid Button အား Click နှိပ်ပေးခြင်း ဖြင့် ငွေပေးချေ မှုလုပ်ငန်း အား ပြီးမြောက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (လူကြီးမင်းတို့ ၏ ဝယ်ယူထားသောငွေစုစုပေါင်း(Item Total) ,Account ထဲ၌ ရှိသောငွေ (Current Amount) , ဝယ်ပြီးနောက်ဆုံးကျန်မည့်ငွေ (Balance Amount) အားလည်း ဖော်ပြပေးထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။)
သင်၏အကောင့်မှငွေဖြင့်ဝယ်မည်။ စနစ်သည် လူကြီးမင်း၏ myanmar music store account balance မှ ငွေပေးချေရမယ့် စနစ် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ ဖြစ်ပါ၍ myanmar music store ၏ ကြိုတင်ငွေဖြည့်ရန်သို့ သွားရောက်ပြီး ကြိုတင် ငွေဖြည့်နိုင်ပါသည် ။ ငွေဖြည့်သည့် နည်းလမ်းကိုယ် အောက်ပါ Redeem from your account တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Figure (4) - သင်၏အကောင့်မှငွေဖြင့်ဝယ်မည်။
Firsty choose redeem from your user name . After that you can Redeem with Myanmar Music Store Gift Card option (or) MPU (or) Red dot (or) Codapay .
ဦးစွာ လူကြီးမင်း၏ username မှ ကြိုတင်ငွေဖြည့်ရန် ကို နှိပ်ပါ။ထို့ နောက် လူကြီးမင်း ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ငွေဖြည့်သည့် နည်းလမ်းများ ကို ရွေးချယ်ပြီး လူကြီးမင်း၏ myanmar music store account တွင် ကြိုတင်ငွေဖြည့်နိုင်ပါသည် (သို့ မဟုတ်) My Cart ထဲမှလက်ကျန်ငွေထပ်မံဖြည့်သွင်းမည် ကိုလဲ နှိပ်၍ သွားရောက်ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်
Figure (5) -ကြိုတင်ငွေဖြည့်ရန်။
Figure (6) - ကြိုတင်ငွေဖြည့်ရန်
Redeem with Myanmar Music Store Gift Card
If you redeem with music store gift card,you need to enter music store redeem code in the following picture
Myanmar Music Store Gift Card ဖြင့် ငွေဖြည့်လိုလျှင် အောက်ဖော်ပြပါ ပုံအတိုင်း ငွေဖြည့်နိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ငွေဖြည့်သည့်လုပ်ငန်းပြီးဆုံးပါက လူကြီးမင်း ထည့်သွင်း လိုက်သော ငွေပမဏ ကိုယ် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ထို့ နောက် သီချင်းဝယ်ယူသည့် လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
Myanmar Music Store Gift Card ကို MR.FONE , လူကြီးမင်း ,MOBILE KING နှင့် Myanmar Music Store တို့ တွင် ဆက်သွယ်မေးမြန်း ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Figure (7) - Redeem with Myanmar Music Store Gift Card
Redeem with MPU
If you redeem with MPU,choose amount that you want to redeem and then credit amount by MPU payment gateway .
MPU ဖြင့် ငွေဖြည့်လိုလျှင် ဖြည့်သွင်းလိုသော amount ကို ရွေးချယ်ပါ။
Figure (8A) - Redeem with MPU
MPU payment တွင် လူကြီးမင်း၏ MPU card မှ card number ကို မှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်းပါ။ MPU card expire date ကို မှန်ကန်စွာ ထည့်သွင်းပါ။ ထို့ နောက် OTP တောင်းပါ လူကြီးမင်း ၏ Email သို့ ရောက်ရှိလာသည့် OTP ကိုမှန်ကန်စွာထည့်သွင်းပါ။ comfirm payment ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ငွေပေးချေသည့်လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာပြီးစီးပါက လူကြီးမင်း ဖြည့်သွင်း လိုက်သော ငွေပမာဏ ကို ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ထို့ နောက် သီချင်းဝယ်ယူသည့် လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
Figure (8B) - Redeem with MPU
CB Pay Payment
If you choose CB Pay payment option, You need to click on CB Pay logo to continue to check out.
လူကြီးမင်းသည် CB Pay Payment Option ဖြင့် ငွေပေးချေရန် ရွေးချယ်ပါက အောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံအား မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး Card Information များအား ရိုက်ထည့်နိုင်ရန်အတွက် CB Pay Logo အား နှိပ်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Figure (11A) - CB Pay Payment
If you choose CB Pay payment option, You need to login with your CB Pay Account and Checkout for your purchased.
လူကြီးမင်းသည် CB Pay Payment System ဖြင့် ငွေပေးချေရန် ရွေးချယ်ပါက အောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံအား မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်းအနေ ဖြင့် ငွေပေးချေမှု လုပ်ငန်း ပြီးမြောက်ရန် လူကြီးမင်းတို့ ၏ သက်ဆိုင်ရာ CB Pay Account အား အောက်ဖော်ပြပါ နေရာတွင် Log In ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက် ငွေပေးချေမှု အဆင့်ဆင့်အား ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Figure (11B) - CB Pay Payment
Pay with MyanPay
If you choose the MyanPay payment options, You need to login with your MyanPay Account and Checkout for your purchased.
လူကြီးမင်းသည် MyanPay Payment System ဖြင့် ငွေပေးချေရန် ရွေးချယ်ပါက အောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံအား မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်းအနေ ဖြင့် ငွေပေးချေမှု လုပ်ငန်း ပြီးမြောက်ရန် လူကြီးမင်းတို့ ၏ သက်ဆိုင်ရာ MyanPay Account အား အောက်ဖော်ပြပါ နေရာတွင် Log In ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက် ငွေပေးချေမှု အဆင့်ဆင့်အား ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Figure (12) - Pay With MyanPay
Pay with Ypay
If you choose Ypay payment option, You need to login with your Ypay Account and Checkout for your purchased..
လူကြီးမင်းသည် YPay Payment System ဖြင့် ငွေပေးချေရန် ရွေးချယ်ပါက အောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံအား မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်းအနေ ဖြင့် ငွေပေးချေမှု လုပ်ငန်း ပြီးမြောက်ရန် လူကြီးမင်းတို့ ၏ သက်ဆိုင်ရာ YPay Account အား အောက်ဖော်ပြပါ နေရာတွင် Log In ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက် ငွေပေးချေမှု အဆင့်ဆင့်အား ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Figure (13) - Pay With YPay
If you are not from Myanmar, You can checkout with Paypal payment option.
ပြည်ပမှ Myanmar Music Store Website အား အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့် ယခုဖော်ပြပါ PayPal Payment System ဖြင့် ငွေပေးချေ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Figure (14A) - PayPal payment
If you choose PayPal payment option, You need to login with your PayPal Account and Checkout for your purchased.
လူကြီးမင်းသည် PayPal Payment System ဖြင့် ငွေပေးချေရန် ရွေးချယ်ပါက အောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံအား မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်းအနေ ဖြင့် ငွေပေးချေမှု လုပ်ငန်း ပြီးမြောက်ရန် လူကြီးမင်းတို့ ၏ သက်ဆိုင်ရာ PayPal Account အား အောက်ဖော်ပြပါ နေရာတွင် Log In ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက် ငွေပေးချေမှု အဆင့်ဆင့်အား ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Figure (14A) - PayPal payment B
If you choose Master Card payment option, You need to click on master card logo to continue to check out.
လူကြီးမင်းသည် Master Card Payment Option ဖြင့် ငွေပေးချေရန် ရွေးချယ်ပါက အောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံအား မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး Card Information များအား ရိုက်ထည့်နိုင်ရန်အတွက် Master Card Logo အား နှိပ်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Figure (15A) - Master Card Payment
If you choose Master Visa payment option, You need to login with your Master Visa Account and Checkout for your purchased.
လူကြီးမင်းသည် Master Visa Payment System ဖြင့် ငွေပေးချေရန် ရွေးချယ်ပါက အောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံအား မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်းအနေ ဖြင့် ငွေပေးချေမှု လုပ်ငန်း ပြီးမြောက်ရန် လူကြီးမင်းတို့ ၏ သက်ဆိုင်ရာ Master Visa Account အား အောက်ဖော်ပြပါ နေရာတွင် Log In ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက် ငွေပေးချေမှု အဆင့်ဆင့်အား ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Figure (15B) - Master Card Payment
လူကြီးမင်းအနေ ဖြင့် ငွေပေးချေမှု လုပ်ငန်း ပြီးမြောက်ရန် လူကြီးမင်းတို့ ၏ Master Card Information များအား ဖြည့်စွက်ပြီး Pay ခလုတ်ကိုနှိပ်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
If you want to download song(s) by iOS device, you would need to use Myanmar Music Store App on the Apple AppStore. If you don't have this app, you can get by following this link – https://itunes.apple.com/ph/app/myanmar-music-store/id818412438?mt=8
iOS device ကိုအသုံးပြု၍ www.myanmarmusicstore.com မှ တေးသီချင်းများ ကို Download ပြုလုပ်လိုပါက Myanmar Music Store App ကို Apple AppStore မှရယူရန်
Figure (16A) - For iOS
If you want to download song(s) by Andriod device, you would need to use Myanmar Music Store App on the Play Store. If you don't have this app, you can get by following this link – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myanmarmusicstore.mms&hl=en
Andriod device ကိုအသုံးပြု၍ www.myanmarmusicstore.com မှ တေးသီချင်းများ ကို Download ပြုလုပ်လိုပါက Myanmar Music Store App ကို Play Store မှရယူရန်
Figure (17A) - For Andriod